JAARMAYAA HAARAA? OROMOON LAMMATA GOWWOOMUU HIN QABU – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooJAARMAYAA HAARAA? OROMOON LAMMATA GOWWOOMUU HIN QABU
Berhanu Hundee, Onkoloolessa 18, 2019
ኢትዮጵያ – Ethiopia from in side, via Elemo AbaNega AbaMecha
Mata duree kanaan barreeffama kana akkan dhiyeessu kan na taasise barreeffama Obboo #JawarMohammed dhiyoo kana Face Book irratti maxxanse tokko dha. Mata dureen barreeffama Jawaar “ADWUI: BAQSUU MOO DIMOKRAATESSUU WAYYA?” kan jedhu yommuu ta’u, qabiyyeen isaa waayee jaarmayaa ADWUI amma jiru kana diiganii jaarmayaa haaraa ijaaruu ti. Barreeffama isaa sana keessatti Jawaar waa hedduu bali’naa fi gadi fageenyaan ibsee jira. Jaarmayaa haaraa ijaaruu kaana keessatti, rakkoon bu’uraa maal akka ta’e, rakkoon inni Oromoof, ODP/OPDOf, ADWUI mataa isaatiif, Saboota fi Sab-lammoota akkasuma akka waliigalaatti biyyattii tanaaf qabu; fallii rakkoolee kanaa maal ta’uu akka qabu Jawaar bal’inaan xiinxalee fi ibsee jira. Barreeffama kiyya kan har’aa kana keessatti, waayeedhuma ijaaramuu jaarmayaa haaraa kana laalchisee yaada qabun dhiyeessa.
Jawaar, waan yeroo ammaa deemaa jiru fi keessaa ODP/ADWUI sirriitti waan beekuuf, waa hundaa ibsee jira. Haala yeroo ammaa Jawaar caalaa namni hubatu ni jira jedhee yaaduun na rakkisa. Kanaafuu waan Jawaar barreessetti nan amana. Jawaar waan tokko tuqee jira. Innis “MM Abiyyi Ahmad siyaasaa Oromoof haaraa dha” jedhe. Ana garuu siyaasaan Oromoo Abiyyiif haaraa ta’ee osoo hin taane, inni (MM) ayidoolojii Itoophiyummaa waan qabuuf, siyaasaa Oromootiif dantaa waan qabu natti hin fakkaatu jedheen amana. Asirratti waan Dr Ittaanaa Habtee dubbate tokkon yaadadha. Innis, “Abiyyi Ahmad nutu Oromoo dha jenaan malee inni ani Oromoo dha ofiin jechuudhaayyuu hin fedhu” jedhe. Kuni dhugaa natti fakkaata. Maaliif yoo jedhame, osoo ani Oromoodha ofiin jedhee; osoo itti amanee fudhatee; osoo Oromummaan dhiiga fi lafee isaa keessa jiraatee, namni kun Sabboonummaa Oromootuu hin xiqqeessu ture.
Amma dubbiin sanaa miti. Abiyyi waan fedhe haa yaadu; waan fedhetti haa amanu; waan barbaades haa hawwu ykn haa hojjetu, garuu yaadni ADWUI diiganii jaarmayaa haaraa ijaaruu kun waan isarraa maddee fi isumaanis karoorfame fakkaata. Waan inni ADWUIrratti dhiibbaa godhaa jiru fakkaatas. Haa ta’u malee, akkuma Jawaar jedhe, ADWUI diiganii jaarmayaa (unitary) ta’e ijaaruun Saboota fi Sab-lammootaaf rakkoo cimaa yommuu ta’u addatti immoo Oromoof hedduu rakkoo cimaa ta’a jedheen amana. Kanaafuu, akkuma mata dureen jedhu asirratti Oromoon gowwoomuus ta’ee gowwoomsamuu hin qabu. ODPn Abiyyi sodaattee ykn isa gammachiisuuf jettee ofdiigdee, jaarmayaa haraa kana keessatti baquu yoo barbaadde, kun dhimma ishii ti. Oromoorraa yeroo xumuraatiif gargar bahuu ishii ti. Kan dur jibbamaa as geesse caalaa tufamtee baduuf deemti jechuu dha. Kun dhimma isaanii ti. Dubbiin akka makmaaksa Oromoo “Yaa soogidda ofiif jettu mi’aawu ykn dhagaa dha jedhanii achi si darbatu” taati.
Dhaamsa gaggabaabaa uummata Oromoo bal’aaf, Qeerroo fi Qarreef akkasumas jaarmayoota Oromoo walaba ta’aniif
Haalli uummatni Oromoo akka waliigalaatti, uummatni keenya kan Oromiyaa Lixaa fi Kibbaa addatti har’a keessa jiru yaaddessaa ta’ee osoo jiruu, balaa hamaan nutti dhufuuf waan jiruuf, ani akka ilma Oromoo tokkootti dhaamsa armaan gadii kana dabarsuun barbaada.
UUMMATA OROMOO BAL’AAF
Yaa uummat Oromoo, shira farra-Oromummaa ta’ee fi gochaa MM fi ODP kanaan hin gowwoomin. Jaarmayaan haaraan ijaaramuuf deemu kun, bu’aa kan siif fidu caalaa balaa hamaa sitti fiduuf deema. Waan hanga har’aatti dhiiga fi lafee ilmaan keetiitiin qabsoo hadhooftuudhaan argatteeyyuu si jalaa diiguuf deeman. Kun hojii farra-Oromummaa waan ta’eef dammaqinaan dhimma kee tikfadhu. Lamuu hin gowwoomin; hanga abbaabiyyummaa kee mirkaneeffattutti qabsoo kee hin dhaabin; injifannoon xumuraa kan kee akka ta’u shakkiin hin jiru.
QEERROO FI QARREE OROMOOF
Qabsoo hadhooftuu gootee; lubbuu Obboolaawwan kee kumaatamaan ittdhabdee; Wayyaanee jilbiiffachiistee qilleensa jijjiiramaa fiddee jirta. Haa ta’u malee, injifannoo ati argamsiistetti har’a humnoota biraatu ittifayyadamaa jiru. Gaafiin Oromoo kan ati qabattee kaate takkallee deebii hin arganne. Kuni hafee siriidhaayyuu injifannoolee QBOn argamsiiseyyuu diiguuf shirri xaxamaa waan jiruuf, dammaqii ka’ii dhimma kee eeggadhu; injifannoolee argamsiistes tikfadhu. Waan si hafes argachuuf qabsoo kee ittifufi malee waan biraatiin hin gowwoomin.
JAARMAYOOTA OROMOO WALABA TA’ANIIF
Addaa addummaa ilaalchaa isin jidduu jirurraa kan ka’e walitti gaarreffachuun jiraatu fi rakkoolee xixiqqoon isin jidduutti uumamanillee, kaayyoo tokkoof akka manaa baatan abdiin qaba. Fedhii biyyoolessaa Oromoo (Oromo National Interest) eeguu fi eegsisuuf fedhii tokko akka qabadn shakkii hin qabu. Walittibaqxanii hoggansa tokko jalatti jaarmayaa tokko ta’uun yoo isin rakkisellee, tumsa waliif taatanii dhimma Oromoo tokkoof akka waliin hojjetan; injfannoolee QBOn galmeessa akka tiksitan; balaa nutti deemu alaalatti arguudhaan ofirraa ittisuuf akka gamtaadhaan hojjettan; Oromoo fi Oromiyaan akka gaaga’ama keessa hin galle uummata keenya akka ijaaratnii fi humna mooraa keenyaa akka cimsitan dhaamsa Obbolummaa isiniif dabarsuu barbaada.
Injifannoon kan uummata Oromoo fi cunqurfamtootaa ti. Qabsoon haqaa fi bilisummaa ni turti malee galii ishiirraa hin haftu.
አዲስ ድርጅት? ኦሮሞ ዳግም መታለል የለበትም